နယူးယောက်မြေအောက်ရထား - နယူးယောက်၏တရားဝင် MTA မြေပုံ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » နယူးယောက်မြေအောက်ရထား - နယူးယောက်၏တရားဝင် MTA မြေပုံ
နယူးယောက်မြေအောက်ရထား - NYC APK ကို၏တရားဝင် MTA မြေပုံ
နယူးယောက်မြေအောက်ရထား MTA ကနေတရားဝင်မြေပုံနှင့်အတူအခမဲ့ NYC အကူးအပြောင်း App ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ app ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းခုနစ်ခုကျော် downloads, ရှိပြီးသငျသညျခမှတစ်ဦးထံမှရကူညီပေးပါမည်သည့်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောလမ်းကြောင်းစီမံပါဝင်သည်
•မန်ဟက်တန်, ဘရွတ်ကလင်း, Queens Bronx နှင့် Staten ကျွန်းအပါအဝင်နယူးယောက်မြေအောက်ရထား၏တရားဝင် MTA မြေပုံသုံးသည်။
• MTA ကနေဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေသင့်ဖုန်းဖြောင့်ကိုစလှေတျသတိပေးချက်များနှင့်အတူမည်သည့်နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက်သတင်းအချက်အလက်ပြသထားတယ်။ *
•နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ clock တိုင်းဘူတာရုံများအတွက်မီးရထားကြိမ်ပြသပါ။
•အင်ပါယာစတိတ်အဆောက်အအုံ, New York ကရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်နှင့် Times Square အပါအဝင်အကျိုးစီးပွား၏အမှတ်ဖို့အစီအစဉ်လမ်းကြောင်း။
• E & E ကိုသတိပေးချက်များဝန်ဆောင်မှုဓာတ်လှေကားနှင့်စက်လှေကားထဲကပြသအဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်လိမ့်မည်သည့်အခါတစ်ဦးအချိန်။
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အနယူးယောက်မြို့သွားရောက်လည်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်•, အထောကျအကူခရီးသွားအကြံပေးချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံ app ကိုတစ်နေရာလေးကိုလမ်းပြရှိပါတယ်။
•သင်အဖန်ဖန်အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့သင့်အနှစ်သက်ဆုံးအတွက်မကြာခဏအသုံးပြုလမ်းကြောင်း Save ။
•တွစ်တာ updates များကိုအထောက်အကူဖြစ်စေအကူးအပြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူတရားဝင် @NYCTSubway ကနေတိုက်ရိုက်လွှင့်။
နောက်ထပ် feature သော့ဖွင့်
•သင်အားလုံးမြေအောက်ရထား၏ 24 နာရီတစ်ရက်လည်ပတ်သည်ကိုသင်တို့သိသလား ထိုရက်သတ္တပတ်၏ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးရထားအချိန်များကိုရယူပါ။
•သင့်လမ်းကြောင်းစီမံသင်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲနေသည့်အခါထွက်ပေါက်သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းအနီးဆုံးဖြစ်ပေါ်ဖို့အကောင်းဆုံးရထားပေါ်တွင်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူ Enhance ။
•ကြော်ငြာ Remove သို့မဟုတ်တဦးတည်းစျေးနှုန်းသည်ဤထပ်တိုးအင်္ဂါရပ်များအားလုံးရရန်အစုလိုက် Saver ကိုဝယ်ကြလော့။
သင်သည်လည်းဝါရှင်တန်ဒီစီလာရောက်လည်ပတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါကျနော်တို့ဘော်စတွန်, ပဲရစ်သို့မဟုတ်လန်ဒန်သင်သည် Google Play ပေါ်မှာငါတို့အခြားအက်ပ်ထုတ်စစ်ဆေးသေချာအောင်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမြို့ရွာတို့အဘို့အကူးအပြောင်း apps များပါစေ။
Plan ကို။ လမ်းကြောင်း။ သက်တောင့်သက်သာနေပါ။
* ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာအသိပေးချက်များကွိုးစားအားထုစဉ်မှာကျနော်တို့ကအချိန်ဒီ 100% အာမခံလို့မရပါဘူးအချိန်မီထုံးစံ၌အပျတျောမူနေကြသည်။ ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်မှမရရှိနိုင်သည့်အခါအခါသမယရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
www.facebook.com/MapwayApps မှာ Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကို join သို့မဟုတ်တွစ်တာ @MapwayApps အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ချစ်ကြလိမ့်မည်။
ဒီ New York မြို့မြေအောက်ရထားမြေပုံထဲကအများဆုံးရရန်, app ခွင့်ပြုချက်အတော်များများအသုံးပြုသည်။ အဘယ်အရာကိုအဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့ www.mapway.com/privacy-policy သွားရောက်ကြည့်ရှု။
app ကိုဒေါင်းလုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့မှန်မှန်သင်တို့အဘို့ကပိုကောင်းစေဖို့အတွက် app ကို update လုပ်။
ဒါက update ကိုအချို့သောဘာဂ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုပါဝင်သည်။
သငျသညျအရာတစုံတခုကိုလက်လွတ်မရသေချာစေရန်, ကိုယ့်အပေါ်လှည့်သင့်ရဲ့ updates တွေကိုစောင့်ရှောက်လော့။
မေးခွန်းတစ်ခုရှိသလား? app ကိုအတွက်အကြောင်းအပိုင်းအတွက်ပံ့ပိုးမှုထိပုတ်ပါ။
နယူးယောက်မြေအောက်ရထား - နယူးယောက်၏တရားဝင် MTA မြေပုံ
24.85 ကို MB
ငါး Download ...